General kupora chokutambudzika nepachinko parlors, inoti-ona kuburikidza nenzira
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ General kupora chokutambudzika nepachinko parlors, inoti-ona kuburikidza nenzira
※ uyewo wokupedzisira
nepachinko yokumusoro Ndapota kureva sezvo zvinoitwa yose indasitiri nokuti zvokutenga kambani anofanira angabatsira ose zuva. Kana funga zvakadaro, asi ndiyo shanduro kunogonawo kuona kuti ose zuva kupora nguva, pakati pavo, zuva riri kuti kutarisira makuru purofiti pane dzose, vachava zvechokwadi pachikamu musi anotaurwa nepachinko yokumusoro. In yakadaro muunganidzwa zuva, kuti arege kuva kurasikirwa guru, ngatitarisei sei kuziva kuti kuda kuti zuva rave akapora.
uyewo kuti nepachinko yokumusoro yokupinda vose, ndinofunga kuti pane zvirokwazvo zuva kwechokwadi. Nepachinko yokumusoro pachikamu musi, akaona zvitoro zvakawanda kuti nehasha yechipiri yezana romwedzi. Izvi zvichaita siyana zvichienderana riini zvitoro nezviitiko uye Xintai kutsiviwa. The sei kuona mazuva mashoma anotevera yakadaro kupora nguva, imi vachiri chipikiri kuchinja.
muganhu mitsetse, akadai zvakamboda kukanganisa, asi maitire chakakomba chipikiri kugadziridzwa kupora nguva, pane chikamu kuti ndinoda kuramba akatarira mumwe. Zvinoita, kana payout pakarepo zvachose, ndiko kuti kana kwete. Muna nepachinko mazwi kuti payout, yainzi Ty. The rokutema Ty, izvozvo anoita chipikiri kuchinja zvimwe kupfuura pakutanga, uye Chirase bhora, ndiyo nzira yokuderedza reshiyo kupinda kutanga uye vavashungurudza.
Uyewo, kana Re Chirase bhora, vave hwakawedzera kuderera bhora mushure jackpot, I bhora kubva haarambi pakarepo. Ari kupora chokutambudzika nepachinko yaiitirwa, zvava zvizhinji nechigadziko akadai chipikiri kuchinja. Kusiyanisa pakati mbambo, asi ari zvakaoma, Toka muenzaniso iri zvayaitenderera paguyo nguva zhinji, kana maonero kuti bhora iri pakarepo zvachose, unogona nani nehasha kana waunoziva kutamba nepachinko. Sezvo muchiti zvinhu kuitika mbambo kuchinja zviri nani nguva, tapota yeuka zvose nzira. Kana ari
Hanemono, unofanira kunyanya vaibata ziso kwakadaro pfungwa. Uyezve, pane nyaya akadai CR muchina, saka kunewo Zvinogoneka kuti igadziridzwe nenzira Horukon, nezvazvo vaizovawo zvakanaka kuramba kunyange pakona musoro.
kwevhiki uye voruzhinji mazororo, nepachinko pamusoro penyu kumorwa sezvamunoziva The chitoro achava mazhinji. Izvi kunyanya, dzakadai yemapurisa zvitoro uye vachibudirira zvitoro, iwe uchava kazhinji achengetere mutengi iri kunyange mevhiki. Sewevhu Suburban muzvitoro, ari muchitoro kuti havabvumirwi kumhanya pamusoro mevhiki, harungashandurwi kuti ariswededze mumwe Migovera uye misi yeSvondo, pane kana wo zvitoro kuti vaite bhizimisi, akadai kuti zviunganidzwe.
Uye, kuti vaizonzwirwa akapora zuva chero nepachinko parlors, pane zuva iro wagadzirirwa. Zviri, Xintai rekona kubva panguva Golden Week mazororo uye kuvhurazve kusvikira rinotevera yatainge tabva kugadziridza zvakare, asi kusvikira pakuguma mwedzi kubva yechi25 mumwe mwedzi zvakare. Kusvikira muna yechi25 mumwe mwedzi akatevedzana mazororo, sezvo kunyange ndaona mupunga dzakakwirira kwakakomba purofiti rokutengesa inotarisirwa, nguva dzose zvichaita akapora parutivi nepachinko yokumusoro.
Uyezve, vaya vaifarira magazini, etc. uyewo Xintai ndiko, saka iwe kutamba kubva rwenyu, hamutsvaki kuti kudzimwa. Machinery bhiri anofanira yakaunganidzwa, chichagamuchirwa akapora kunotoitika mutambo kumira. Xintai iri kana akarova pazuva rokutanga Xintai, zviri kuti pane mukana kuti nyaya yakanakisisa kurova panguva apo wakadzikama zvishoma. Uye kunzwisisa kuti
nepachinko yokumusoro pachikamu musi, tapota ngwarira kuti pfachura inivhesitimendi. Zvisinei, kana kuunganidza musi, chete zvatakaona, nekuti handizivi kwazvo, achabuda zvavanoda kuti rova ??zvachose. Kuti nerombo aine zvishoma pamusoro mari, zvitoro ezvinhu uye zvipikiri Zvakanakisa, yava kuonekwa kunyange zvishoma. Saka iwe kutamba, et unto., Harina chikonzero kudzimwa. Machinery bhiri anofanira yakaunganidzwa, chichagamuchirwa akapora kunotoitika mutambo kumira. Xintai iri kana akarova pazuva rokutanga Xintai, zviri kuti pane mukana kuti nyaya yakanakisisa kurova panguva apo wakadzikama zvishoma. Uye kunzwisisa kuti
nepachinko yokumusoro pachikamu musi, tapota ngwarira kuti pfachura inivhesitimendi. Zvisinei, kana kuunganidza musi, chete zvatakaona, nekuti handizivi kwazvo, achabuda zvavanoda kuti rova ??zvachose. Kuti nerombo aine zvishoma pamusoro mari, zvitoro ezvinhu uye zvipikiri Zvakanakisa, yava kuonekwa kunyange zvishoma.